Puntland oo soo saartay xeerka caafimaadka oo xadaddaya xirfadlayaasha ajnabiga ah ee caafimaadka – Radio Daljir
Maarso 24, 2013 11:20 b 0
Garoowe,24 March 2013 Xeerkaan ?oo uu ku saxiixan yahay madaxweynaha Puntland C/raxmaan Sheekh Maxamed Maxamuud Farooole iyo labada gole ee Puntland ayaa wasaaradda caafimaadku sheegtay inuu dhawaan dhaqan galayo oo lagu faafinayo idaacaddaha maxalig ah.
Wasiirka caafimaadka Puntland Cali C/laahi Warsame oo xeerkaan sharaxaad ka bixiyey mar uu ka hadlayey ?munaasabadii maanta lagu xusayay maalinta qaaxada aduunka ayaa? waxaa uu sheegay inuu sharcigaan xakameyndoono ?xarumaha caafimaadka ee gaarka loo leeyahay.
Bartamihii sanadkii 2012 ayaa barlamaanka Puntland xeerkaan dib ugu celiyeen wasaaradda caafimaadka kadib markii mudanayaasha qaar? ay saluugmo ka muujiyeen ?qodobo dhowr ah oo ku qornaa sharcigaan.
Mas?uuliyiinta wasaaradda ayaa wax kabadal kusoo sameeyay sharcigaan, Waxaana barlamaanku ay meel mariyeen 9 bishii Janaayo 2013 ee sanadkaan aynu ku jirno.
Wasaarada caafimaadka ayaa walaac ka muujisay xirfadlayaal ajnabi ah oo ay xarumaha caafimaadka ee gaarka loo leeyey ay ka keensadaan dibada kuwaas mudooyinkii danbe ku soo badanayey Punltand.
C/wali Maxamed Shilh